Himalaya Dainik » चीनमा फेरी अर्को नयाँ प्लेग भेटियो, महामारीको सम्भावना कति ?
चीनमा फेरी अर्को नयाँ प्लेग भेटियो, महामारीको सम्भावना कति ?
एजेन्सी । चीनवाट फेरी अर्को रोगको महामारी फैलन संकेत देखिएको छ । चीनवाट सुरु भएको कोरोना अहिले विश्वव्यापी फैलिरहेको छ । त्यसको रोकथामका लागि खोपको परिक्षण भएको छ भने कोरोनाको स्रोत पत्ता लगाउने काम भइरहेको छ । कोरोनाको कहर सकिन नपाउँदै फेरी अर्को महामारीको संकेत चीनमा देखिएको बीबीसीले जनाएको छ ।
चीनको स्वायत्त क्षेत्र भित्री मङ्गोलियामा एक व्यक्तिमा प्लेग पुष्टि भएको छ । प्लेग कोरोना भन्दा बढी मानिसको निधन गराउने दर भएको रोग हो । प्लेग देखिएका ति पुरुषलाई अहिले क्वारेन्टिनमा राखिएको छ । उनको अवस्था नाजुक रहेको बताइएको छ ।
यस अघि नै वैज्ञानिकहरुले चीनवाट अर्को महामारी फैलने र त्यो सुँगुरको कारणले हुने दावी गरेका थिए । बैज्ञानिकको सो दावी पुष्टि भएको छ । ब्यक्तिमा प्लेग पुष्टि भएपछि सरकारी निकायहरूले सावधानीका उपायहरू अवलम्बन गरेको बीबीसीले जनाएको छ । अधिकारीहरूले चारमध्ये तेस्रो तहको चेतावनी जारी गरेका छन्।
ति ब्यक्तिलाई प्लेग भएको आशंका पछि बायान्नुरस्थित एउटा अस्पतालमा शनिवार भर्ना गरिएको थियो । अस्पतालमा परिक्षण गर्दा उनलाई प्लेग भएको पुष्टि भएको हो । उनी कसरी संक्रमित भए भन्ने खुलेको छैन । उनको उपचार सुरु गरिएको चिकित्सकले बताएका छन् । यो पनि ब्याक्टेरियावाट हुने रोग भएका कारण घातक हुने चिकित्सकले बताएका छन् । तर उपलब्ध एन्टीबायोटिकको प्रयोगबाट उपचार सम्भव छ ।
प्लेगको संक्रमित भेटिएको पुष्टि भएपछि चीनमा अहिले जीवजन्तुको सिकार गर्न र मासु खान रोक लगाइएको छ । कोरोनाको जस्तै सचेतना अपनाउदै रोगको लक्षण देखिए तत्काल खबर गर्न आग्रह गरिएको छ ।
विश्वमा बेलाबेलामा प्लेग देखा परिरहन्छ । सन् २०१७ मा म्याडग्यासकरमा ३०० जनाभन्दा बढी मानिसमा प्लेग भएको थियो ।
प्रकाशित मिति २२ असार २०७७, सोमबार ११:५९
२४ घण्टामा २६४ कोरोना संक्रमणमुक्त, निको हुनेको संख्या ६ हजार ८११ पुग्यो
घरबाहिर निस्किने र सामाजिक दूरी कायम नगर्नेलाई तत्काल पक्राउ गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृहमन्त्रालयले दियो निर्देशन
पुर्व अनेरास्ववियूका युवाहरुले पार्टी फुटेको भन्दै गरे कोठे पार्टी (भिडियो)
वैज्ञानिकहरूले गरे हावाबाट कोरोना भाइरस सर्ने दाबी, भेटे यस्ता प्रमाणहरु
सलह कीराले खाएको मकैको बोट देखाउँदै अर्खाका किसान